Xaqiijiye & Abuurayaasha
Codsiga Ansixiyaha (N/A)
Banc™️ waxa ay abuureysaa goobta xigta ee la tagi karo Nagu soo biir safarka xiga ee FinTech ee qarniga. Dadka, dadka. Warqad cad Beddel & Iibso crypto oo leh 0% kharashyo BancDex™️ waa isku beddelka/Aggregator baahsan kaas oo ururiya dhammaan isbeddellada kala duwan ee Binance Smart Chain (BSC), Ethereum (ETH) iyo shabakadda Polygon hal codsi. Daahfurka APP Docs Ka hel ilaa 500% APY BancStaking™️ BancStaking™ waa goob wax lagu kala iibsado oo bixisa noocyo kala duwan oo ah Beta, Alpha, Omega iyo Valhalla. Daahfurka APP Docs BancDAO™️ ku dhiirigelinta bulshada inay isbedel sameeyaan, hal mar BancDAO™️ waa Codsiga Codaynta Maamulka Baahsan ee bulshada Bancc™️ si ay u keento soo jeedin iyo in ay hesho cabbir inta la sheegay soo jeedinta la doonayo. Daahfurka APP Docs Xiisaynaysaa iskaashiga? Maanta nala soo gaadho oo aan xalin doonno wax labada dhinacba faa’iido u leh Nala soo xiriir Docs
Bancc waa shirkad Blockchain ah oo dejinaysa abuuritaanka madal maaliyadeed oo baahsan oo soo socota iyada oo ku xidhaysa faraqa u dhexeeya tignoolajiyada jira iyo fursadaha blockchain.
Halkan ka iibso sBanc!
Warbaahinta ugu sareysa ayaa na aqoonsan
Waxaa laga yaabaa inaad naga taqaan...
Hal talaabo markiiba
Saddex sano oo la sameeyay
Tilmaamaha deegaanka ee Banc
Suuqa caalamiga ah & cryptocurrency waxay ku xaddidan yihiin xulashooyinka maaliyadeed ee qaaliga ah oo gaabis ah in la isticmaalo. Ka tagista suuq weyn oo aan la taaban. Inaga oo gaabinaya beddelaad wanaagsan, taasi waa waxa aan ilaa hadda ku xayirnay…
Ku soo dir lacag adduunka oo dhan 1 ilbiriqsi gudahood adoo isticmaalaya app-kayaga fudud
Maaliyadda & Ganacsiga
Si fudud uga ganacsata cryptocurrency-ka aad ugu jeceshahay abkayada fudud ee isticmaalka
Ku bixi debit / credit BancCard ️ ama si toos ah ugu bixi boorsada cryptocurrency. Lacagtaada, doorashadaada
Ku deji dukaankaaga onlaynka ah dhawr dhagsi oo ku samee Banc™️ Marketplace
Bancc™️ Alaabooyinka & Adeegyada
BancSwap™️ waa isweydaarsi baahsan oo leh qandaraasyo caqli-gal ah oo la hubiyay si loo bilaabo dhisidda dareeraha lammaanaha soo socda ee calaamadda Banc sida BUSD, USDT, WBNB ama la siiyo dareere kasta oo ku saabsan nidaamka deegaanka ee Binance Smart Chain.
BancYield™️ waa madal wax-soosaar beereed baahsan oo aad sBanc ku beeran karto si fudud oo dhiirigelin leh. Bixi mid ka mid ah lammaanaha oo ku hel abaalmarin sBanc.
BanccCEX™ waa beddelka dhexe oo aad awood u yeelan doonto inaad ku ganacsato ilaa 160+ lammaane oo leh taageero lacag badan oo ka mid ah lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' sida Bitcoin, Ethereum, Dash iwm. BanccCEX™ awoodaha ganacsi laakiin sidoo kale amaahinta/amaahda doorashooyinka ee isticmaalayaashu si ay u kasbadaan.
BanccAccount™️ waa akoonkaaga gaarka ah si aad si fudud ugu yeelato dulmar guud oo ku saabsan hantidaada fiat iyo cryptocurrency. Dalbo BancCard™ kaaga oo bilow inaad kaydiso khidmadaha wax kala iibsiga oo dhan marka aad saamiyadaada ku shubato BancChain™️.
BancNFT™️ / Q3
BanccNFT™️ waxay noqon doontaa qayb gaar ah oo xaddidan oo ka mid ah NFT's isticmaaleyaasha si ay gacmahooda u helaan taasoo yeelan doonta astaamo naqshadeed oo kala duwan oo NFT kasta oo gaar ah. Tilmaamuhu waxay noqon doonaan inta u dhaxaysa khadadka dalabka hore ee kaararka deynta ee soo socda iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin ganacsiga.
BancPay™️ waa albaabka lacag bixinta ee lacagaha fiat iyo cryptocurrencies. Aqbal qof kasta meel kasta oo uu joogo Visa, MasterCard, American Express iwm oo si toos ah ugu wareeji BancCex™️ si aad u hesho fiat ama cryptocurrency.
BanccMerchant ™️ waa nidaam si buuxda u soo ifbaxaya si loo bixiyo dabacsanaan iyo miisaan fudud oo baayacmushtar kastaa aqbalo oo uu bilaabo iibinta alaabadooda/adeegyadooda adduunka, labadaba onlayn iyo offlineba.
La shaqayn karo oo la qiyaasi karo
Wax kala iibsiga xawaaraha hillaaca & ilaa 10,000 Macaamil ilbiriqsikii
Ku hel $BANC orod
Ku beddel in ka badan 100+ hanti oo isdhaafsan
Samaynta xalal fudud
Isticmaalaha Saaxiibtinimo Loo Sameeyay Qof Kasta
WAA MAXAY BANCC?
Mid ka mid ah caqiidadeena ugu weyn ayaa ah in qadaadiic/calaamad kasta oo Crypto ah ay tahay inay lahaato adeeg. Mashruuc badan ayaa seegaya qeybtaas laakiin ma sameyno. $BANCC waxa loo isticmaali doonaa madalkeena si loo xaliyo mushkilada aduunka dhabta ah waana waxa naga dhigaysa mid ka duwan.
Isticmaaluhu si otomaatig ah ayuu u iibsadaa Bancc.
Isticmaalayaasha ayaa soo dira iibsada
$Banc isticmaal isticmaalaha la rabo
FIAT AMA CRYPTO
Isticmaalayaashu waxay helayaan bancc waxayna ku beddelan karaan fiat kasta ama crypto
waxay door bidaan gacan ama si toos ah.
Fudud & Qalafsan
Aragti ayaa la abuuray
Fikraddii hore ayaa la abuuray. Waxaan rabnay inaan abuurno badeecad awood u siinaya lacag bixinta xadka si degdeg ah, sahlan oo ugu yar ee suuqa. Cilmi-baadhistu waxay soo gabagabaysay in bixiyeyaasha hadda jira ay bixiyaan adeegyo duugoobay, aan la isku halayn karin oo kharash badan isticmaalayaasha. Waxaan gaadhnay in si aan u bixinno wax ka wanaagsan inaanaan noqon karin kuwo gaar u ah dabaqad dhaqaale oo bulsho oo gaar ah. Waxaan go'aansanay inaan cusbooneysiinno oo aan dib-u-eegno waxa aan hadda ugu yeerno "platform".
$50K Abuurka Wareega Oo La Soo Kordhiyey
Waxaan ku guulaysanay $50k Seeds oo wareeg ah oo waxaan helnay xoogaa lacag ah si aan u bilowno horumarinta goobta. Dabayaaqadii 2021 dib ayaan u summeeyay oo dib u cusboonaysiinay tignoolajiyada aan aaminsanahay in loo baahan yahay si loo abuuro wada shaqayn, hufan oo ay ku jirto blockchain.
✅ - Iibinta Dadweynaha ee Silsiladda Smart Binance (PinkSale)
✅ - Bangiyada & Lacagta Cryptowallet
🚀- Olole suuqgeyneed weyn (oo socda)
⚡️- BanccCEX™️ (Isweydaarsiga Dhexe)
⚡️- Iswaafajinta Mashiinka Farshaxanka ee Ethereum
⚡️- Isku-beddelasho isku-dhaaf ah
⚡️- Kadinka Lacag bixinta
❇️ - Wax badan oo soo socda…
⚡️- Nidaamka Iibka-Bar-Iibka
⚡️- Meesha ugu dambeysa ee leh dhammaan alaabada kore oo hal codsi ah
Ku saabsan Banc
Waxaan nahay sababta Crypto waxay noqon doontaa mid guud. Khaladaadka warshadaha lacag-bixinta waxay ku dhowdahay inay noqdaan xusuusta hore. Waxaa la joogaa waqtigii crypto uu sameyn lahaa waxa loo qorsheeyay inuu sameeyo - xalliyo dhibaatooyinka adduunka dhabta ah. Anaga oo haysana qadaadiicda $BANCC iyo dhamaan sifooyinka la socda - waxa aanu rumaysanahay in aanu nahay mustaqbalka warshadaha lacag bixinta waxana aanu kugu martiqaadaynaa safarka.
Aasaasaha & Madaxa Tignoolajiyada
Wuxuu galay booska crypto ilaa da'da 13 wuxuuna abuuray 14 sano jir ganacsigiisii ​​​​ugu horreeyay ee Benjamin, dhisidda mareegaha iyo barnaamijyada. Waxa uu leeyahay aqoonta ugu farsamada iyo muhiimka ah ee horumarinta blockchain, dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhismaha tignoolajiyada horumarsan. Isagu waa qayb muhiim ah oo lagu dhisayo guusha Bancc.
Benjamin hadda waa ciyaaryahan xirfadle ah iyo maalgeliyaha hantida, saamiyada iyo crypto. Benjamin waa lammaane da'yar oo ka tirsan khamaarka 'crypto online casino'. Benjamin waxa uu bilaabay shirkadiisii ​​ugu horaysay isaga oo 15 jir ah isaga iyo Nils-Julius waxana uu isha ku hayaa in uu arko fursado aanay dadka kale arki karin.
Isak waxa uu ahaa maalgeliyaha hantida ilaa 18 jirkii oo hadda waa maamulaha guud ee shirkad nijaarnimo ku guulaysatay. Isak waxa uu leeyahay karti wanaagsan oo uu wax ku dhaliilo oo uu wax ka eego dhinac kale. Waayo-aragnimada dhaqaale ee weyn iyo fikirka muhiimka ah Isak wuu ogyahay waxa loo baahan yahay si loo socodsiiyo ganacsi guul leh.
Oskar waa soo saaraha soo saaraha ee dhawaan la dhamayn doono. Oskar waxa uu leeyahay il heer sare ah oo lagu abuurayo laguna naqshadeeyo mareegaha, apps-ka iyo wax kasta oo la socda habka loo sameeyo. Oskar waxay noqon doontaa taageero aad u fiican abuurista iyo hogaaminta habka naqshadaynta ee madal Bancc.
Mirian waa wax weyn ku soo kordhinaya kooxda, iyada oo leh xirfado suuqgeyneed oo muhiim ah oo xeel dheer. Mirian waxay habayn doontaa, horumarin doontaa oo ay daryeeli doontaa suuqgeynta Bancc. Mirian waxay si fiican ugu hadashaa Ingiriisi iyo Isbaanish labadaba iyadoo leh xirfadaheeda laba-luqadlaha ah Bancc waxay la xiriiri kartaa isticmaaleyaal badan oo taageero, macluumaad iyo baraha bulshada.
TC-Crypto waxay khibrad dheer u leedahay dayactirka Shabakadda iyo habaynta warshadaha isgaarsiinta. TC-Crypto macno ahaan ilaa maalintii kowaad ayuu nala joogay, aad buuna u xiisaynayay mashruuca. Waxaan ku aragnaa karti weyn aqoontiisa iyo xirfadihiisa qaybta hardware/software ka badan ee blockchain.
Nick waxa uu xamaasad weyn u leeyahay crypto iyo Bancc. Aqoontiisii ​​hore ee suuq-geynta & iskaashiga. Nick wuxuu diiradda saari doonaa fidinta wacyigelinta mashruuca iyada oo loo marayo iskudubarid suuq-geyneed iyo helitaanka fursadaha iskaashiga weyn.
Raza waa qoraa maqaal aad u fiican oo jecel cryptocurrency si aad u badan oo uu bilaabay inuu wax ka qoro. Iyada oo ku saleysan Pakistan, Raza waxay noqon doontaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee qoraaga Bancc, cusboonaysiinta bulshada iyo warbaahinta bulshada waxyaabaha xiisaha leh ee soo socda!
Hubi inaad ku biirto oo aad ka qayb qaadato fadhiyada AMA todobaadlaha ah!
Sidee Bancc™️ ula tartami kartaa Crypto.com, Binance iwm?
Fikradda asaasiga ah ee ka dambeysa shirkad kasta oo guulaysata waxay diiradda saaraysaa faa'iidada dabcan. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Bancc™️ iyo shirkadahan ayaa ah in shirkadahani ay rabaan inay u abuuraan dakhli sare sida ugu macquulsan saamilayayaashooda iyo ansaxiyayaashooda ayaa loo arkaa inay yihiin shuraako ku dhex jira istaraatiijiyada shirkadooda iyo qaabka dakhliga. Bancc waxay keentaa nooc dakhli oo isku mid ah laakiin isha "dadweynaha". Hoos u dhigida wadarta dakhliga ee Bancc iyo kordhinta ka qaybgalayaasha blockchain.
Sidee Bancc™️ u samayn karaa waxyaalahan oo dhan?
Tiknoolajiyadu waa qayb xiiso leh oo ka mid ah horumarka iyo sida aan ku aragnay Bitcoin, gaar ahaan tobankii sano ee la soo dhaafay. Arrimuhu waxay bilaabeen inay u kobcaan xawli ka weyn sidii hore. Bancc waxaa lagu aasaasay aaminsanaanta in tignoolajiyada ay tahay in qof walba heli karo oo ay ku adkeyso isticmaalayaasha inay la falgalaan maaha wadada aan aaminsanahay inay sax tahay. Marka la isku xidho tignoolajiyada jira ee leh taariikh hore oo muujinaysa xasilooni iyo qolka korriinka Bancc™️, waxay awood u yeelan doontaa inay soo afjarto farqiga u dhexeeya aaladaha bangiyada caadiga ah iyo jawiga cryptocurrency.
Waa maxay sababta Bancc loogu baahan yahay?
Dunidu waa isbedeshay oo cryptocurrency waa halkan in la joogo. Kaliya hal shay, khidmadaha. Haddii aad u fiirsato isticmaalayaasha guud ee tusaale ahaan adeegsada adeegyada xawaaladaha. Kharashyadu waa isku mid. Qofna ma rabo inuu ku shaqeeyo lacag la'aan laakiin ku dallacida khidmadaha sare waxay dhaawaceysaa koritaanka suurtagalka ah ee shabakada. Dirista 10$ ee qiimaheedu waa inaanay ku kacayn 60$ wakhtiga ugu horaysa. Dadweynuhu waxay u baahnaan doonaan wax ka qiimo jaban oo ka sahlan adeegsigooda marka loo eego adeegyada hadda la bixiyo. Bancc™️ wuxuu u xalliyaa dhibaatadan qaab baahsanaan leh isagoo abuuraya dhaqaale caafimaad qaba oo waara oo aan ku tiirsanayn hal qayb, laakiin guud ahaan isticmaalayaasha shabakadda.
Isdiiwaangeli warsidaha maanta.
Hubi inaad had iyo jeer la socoto waxyaabaha ka socda Bancc, joog ama labajibbaaran.
Markaad saxiixdo, waxaad ogolaatay annaga Shuruudaha & Adeegyada.
Xuquuqda daabacaadda © 2022 Banc™️ | Waxaa xoojiya Banc™️⚡️
Macluumaadka Qandaraaska Smart
Magaca Token - Bancc
Abaalmarinta Token - BTC
Kharashka dareeraha - 1%
Kharashka Iibka - 0% (Gubashada gacanta)
Kharashka Milicsiga - 7%
Kharashka Suuqgeynta - 3%
Wadarta Khidmadda - 11%
jajab tobanle: 9